Hay’adda shaqalaha dowladda Oo Bulshadda Reer Ceerigaabo U Balan qaaday In Shaqaale Badan u Qori Doonaan | Dhaymoole News
Hay’adda shaqalaha dowladda Oo Bulshadda Reer Ceerigaabo U Balan qaaday In Shaqaale Badan u Qori Doonaan
November 28, 2018 - Written by wariye999
Ceerigaabo(dhaymoole)- Hay’adda shaqalaha dowladda ee Somaliland, ayaa si rasmi ah u shaacisay in maanta bulshadda ku dhaqan gobolka Sanaag loo daahfuraayo tartankii Imtixaanka shaqooyinka dowladda ka bannaan loo gelaayo.
Guddoomiyaha hay’adda shaqalaha dowladda ee Somaliland md Sharmarke Axmed Muxumed Geelle oo ka hadlayey madal ay ku qalinjebinaayey dufacadii afraad ee ka baxday Jaamacada Sanaag ayaa shaaciyey wakhtiga iyo goobaha shaqooyinka gobolka Sanaag ay dowladdu ka qaadanayso Imtixaanka ay ugu geli doonaan reer Sanaag.
Sharmarke Axmed Muxumed Geelle oo ka hadlay shaacinta wakhtiga la gelayo imtixaanka loogu tartamayo shaqooyinka dawladdu qaadanayso Sanaag ayaa yidhi. “Haddii awal qalin-jabinaha la iman jiray iyaga oo kaliya la bogaadinayo, saaka waxa aan idinla joognaa aniga oo idin bushaaraynaya in isla berito 50-Kaalmo Shaqo ku qaadayno tartankooda isla Jaamacadan. Dalka waxaa ka bilowday maamul-wanaag iyo Maamul-daadajin fursadaha shaqo-na muwaadin walba halkiisa ayey ugu iman doonnaan, waxa aanan 28-ka maanta qalin-jabiyey u rajaynayaa guul iyo gobonimo”
Guddoomiyaha oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu inta ku daray “Waxaa si habsami ah u soo dhamaystirmay qabashada codsiyada Shaqo ee gobolka Sanaag halkaas oo ay dhalinyarada aqoonyahanka ahi ku tartami doonnaan 50-Kaalmo Shaqo oo hay’adaha Dowladda ka bannaanaday. haddaba, tartankii u qorshaysnaa in uu qabsoomo “